မြူပြာပြာကြောင့် အဝေးက တောင်တန်းတွေကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရဘူး။ တိမ်တိုက် ပါးလျလျ ဟိုတကွက် ဒီတကွက်နဲ့ ကောင်းကင်ဟာ မကြည်စင်လှဘူး။ လေ တချက်တချက် တိုက်လာရင် အေးသလိုလို ရှိပေမဲ့ ဝင်းပတဲ့ နေရောင်ခြည် ကြောင့် နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိတယ်။
စိုက်လက်စ အပင်ခြေရင်းမှာ အပြီးသတ် မြေဖို့လိုက်ပြီး ကဲ.. ပန်းနွယ်နှင်းဆီရေ ဒီနေရာမှာ ရှင်သန်မယ် မဟုတ်လား လို့ ရို့စ် က ဆိုတယ်။ ပြီးတော့ ရေ နည်းနည်း ဖြန်းလိုက်တယ်။ ကျွန်မ က ရို့စ် ရဲ့ ကျစ်ဆံမြီး တုတ်ခဲခဲပေါ်မှာ ထိုးစိုက်ပန်ဆင်ထားတဲ့ ပန်းရိုင်းနှင်းဆီခက်ကို ငေးနေပြီး အတော်ကြာတော့မှ ဘာ အထိမ်းအမှတ် ပြောရမလဲ လို့ မေးလိုက်တယ်။
မနက်က သီးမစ်လွင်ပြင်ဘက် ဆင်းတဲ့ ကားလမ်းနံဘေးက တောရိုင်းနှင်းဆီရုံက အပင်တချို့ ကို ကျွန်မတို့ သွားတူးလာခဲ့ကြတယ်။ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်နေတဲ့ နှင်းဆီတောကြီးဟာ လှလိုက်တာ။ သမ အအေးပိုင်းရာသီကြောင့် ပွင့်ဖတ် ပွင့်ချပ်တို့ရဲ့ အရောင်အသွေးဟာ တောက်တောက်ပပ ရွှန်းစိုလျက်။ အရွက်အခက် တို့ဟာ စိမ်းမြမြ။
အိမ်ရောက်တော့ အမိုးခုံးကလေးနဲ့ ပန်းရုံလုပ်မယ် ဆိုကာ အရိုင်းပင်ကို ပုံသွင်းရန် ကြံ ကြရော။ သူ ခမြာ လွင်ပြင်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှင်သန်နေရာက လူတို့ လက် စော် နံ ကာမှ ကြိုးနဲ့ အချည်အနှောင် ခံလိုက်ရတယ်။ ပုံဖော်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း နွယ် ရစ် ပတ် ကာ ကြီးပြင်းရှင်သန် လာရတော့မယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ပြုပြင်စီရင်ခြင်းကင်းတဲ့ အလှကို အလိုမရှိသူတွေလား။ ပိုမို တင့်တယ်လှပစေရန် ရည်ရွယ်ရင်း နဲ့ တုပ်နှောင်ခြင်းကို ပြုသူများလား။
‘ဘာ အထိမ်းအမှတ်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ခြံထဲ ဒီပန်းပင် ရှိစေချင်လို့ပဲ။ မစု ဘာပြောချင်နေလဲ ကျနော် သိတယ်။ ပြီးသွားပြီ မစု။ ကျနော် အေးဆေးပဲ။’
ရို့စ် ဒီလို သက်တောင့်သက်သာ ပြောနိုင်ဖို့ အချိန် ဘယ်လောက် ကြာလိုက်ပါလိမ့်။ တစ်လ လား။ နှစ်လ လား။ တလောက သူကလေး ချစ်ရေးချစ်ရာကြောင့် အလူးအလိမ့် ဖြစ်နေတော့ ဒီတကြိမ် ပြန် မတ် လာဖို့ ကြာမြင့်မယ် ထင်နေခဲ့တာ။ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တခုဟာ အလွန်ဆုံး သုံးလပဲ ခံတယ်လို့ ကျွန်မ ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
‘ဒါဆိုလဲ ပို၍ လှပပွင့်လန်းတဲ့ မနှင်းဆီ ကို ရည်စူးပြီး စိုက်တယ်ပေါ့ဟယ်။’
ရို့စ် နာမည် အပြည့်အစုံ Rose Par Chin ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို ကျွန်မ ရည်ညွှန်း လိုက်တော့ သူ က လွင်လွင်သာသာ ရယ်လိုက်တယ်။
‘ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကျနော် ဟာ ကျနော် ဖြစ်ခြင်းအတွက် ဒီ အပင်ကို စိုက်တယ်။’
ရို့စ် ကိုယ်တိုင်ကိုက ပန်းနွယ်ရိုင်းနှင်းဆီ ပဲလို့ ကျွန်မ က ဆိုချင်တယ်။ သဘာဝ တောရိုင်းနှင်းဆီ လို တောက်တောက်ပပ။ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ချစ်စဖွယ် မိန်းမရွယ်။ သူ့ ဆံပင်တွေက အုံထူထူ နက်မှောင်မှောင် နဲ့ ဖြောင့်စင်းစင်း ရှိတယ်။ ကိုယ်ဟန်ပြည့်ပြည့် အသားလတ်ကာ ကုန်းမြေမြင့် မျိုးနွယ်ရင်း ပီသ တဲ့ ခြေဆံလက်ဆံ နဲ့။ မြင်စမှာပင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာ လက်ခံစေတဲ့ မျက်နှာပေါက် ရှိတယ်။
‘တခြားသူတဦးဦးအတွက်၊ ခံစားမှု တခုခုအတွက် စိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့် ဖြစ်တည်မှုကို ကျနော် လက်ခံတဲ့အနေနဲ့ စိုက်တယ်လို့ ပြောရအောင်။’
သူ့ ဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံသူတွေထဲ သူ့ သွေးသားရင်းတွေ ပါမှ ပါ ပါလေစ။ ပန်းနွယ်ကို ပုံသွင်းချည်နှောင်ပြီး အထူး တင့်တယ်စေလိုတဲ့ သဘော ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတော့ ရို့စ် ရဲ့ လက်ရှိကာလ လှုပ်ရှားနေထိုင်ပုံကို ဘဝင်ကျလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
အိမ်ပြန်နောက်ကျရင် အိမ်တံခါး ဖွင့်မပေးဘူးလို့ ဆိုတာ၊ အိမ်ကလူတွေ ကျနော် ကို ခြောက်လှန့်ရုံ ပြောတယ် ထင်ထားတာ။ တကယ်ကို တညလုံး ကျနော်ကို အအေးတောထဲ ပစ်ထားမယ် မထင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော် တခြားအိမ် တအိမ်အိမ် ကို ပြန်သွားလို့ ရသားနဲ့ အိမ်ရှေ့ လှေခါးထစ်မှာ တညလုံး ထိုင်နေခဲ့တာ လို့ သူ ရင်ဖွင့်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီညက နှင်းဆီ လုံမပျို ရဲ့ ရင်ထဲ ဆူး ပေါက်ခဲ့သလား။ မှောင်ရိပ်ထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကလေးမလေး ကို ကျွန်မ မှန်းဆ မြင်ယောင် မိတယ်။
‘ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီး ထားပြီး မနားမနေ အားထုတ်နေတဲ့ မိသားစုမှာ ကျနော် မွေးလာတာ။ ဒီရောက်တော့ ရည်မှန်းချက် ဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့ သူတွေနဲ့ ကြုံ ရပြန်တယ်။’
ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ ကမ္ဘာ နှစ်ခုကို ကူးချည်သန်းချည် နေထိုင်ခဲ့သူ ရို့စ် ဟာ သူ့ ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာ ကို သူ ဘာသာ တည်ဆောက် ထား သူ ဖြစ်တယ်။ သူ လုပ်ချင်တာ၊ လုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်နေတာ များပြားလှပြီး ရံဖန်ရံခါ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းစုံ ရောထွေးနေကာ၊ နေ့ခင်းအိပ်မက် မက်နေသူပမာ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ကင်မရာနောက်မှာ ရပ်နေရာက ရုတ်ချည်း ဆွဲလက်စ ပန်းချီကားရှေ့ ရောက်သွားတတ်သလို ကဗျာစပ်နေရင်းက ပိုးချည်မျှင်ရောင်စုံ ကို အထည်အဖြစ် ရက်ဖောက်နေသူ ဖြစ်သွားပြန်တယ်။
‘မစု မနက်ဖြန် ရမ်းထလို သားဖွားခန်း သွားကြည့်ပြီးရင် ပြန်မယ် မဟုတ်လား။ ကျနော် လူငယ်သင်တန်း မစခင် မန္တလေး ခဏ လိုက်ခဲ့မယ်။ ကလေးတွေကို အခြေခံ ပန်းချီ သင်ပေးဖို့ ဝယ်စရာ ရှိနေလို့။ ပြီးတော့ ကျနော့် ဆံပင်ကို အရောင် ဆိုးမလားလို့။ မီးလျှံ လို နီရဲ နေတဲ့ အရောင်လေ။’
‘အင်း။ နောက် နှစ်လ ကြာမှ… ဇွန် လ လယ်လောက်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှ ပြန် လာ ကြည့် ရ တော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ သီးဆန်ကျောင်းက တဝက် ပြီးနေပြီ။ ထပ် ကြည့်ရင်း ကလေးဘက်က လှည့် ပြန်မလားလို့။’
‘မစုကလဲ အမှတ် မရှိသေးဘူး။ ဟိုတခါကလဲ လေယာဉ် ခရီးစဉ်ဖျက်လို့ ရ ရာ ကား နဲ့ ပြေးရတော့ မဟာမြိုင်တောထဲ တိုင်ပတ်ပြီးပြီ။ မန္တလေး ဆင်းရအောင်ကွာ။ ဟိုရောက်ရင် ဘာနဲ့ ပြန်ပြန် ရွေးချယ်စရာ ပေါလွန်းလို့။ သူပဲ ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့ အခြေအနေကနေ ရွေးချယ်စရာ ဆိုတာ ဘာလဲ သိလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် တရစပ် အော်နေပြီးတော့။’
‘ဟဲ့ ကလေးကနေ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်မယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်မှုပဲလေ။’
‘ဒါ ရွေးချယ်မှု မဟုတ်ဘူး။ ဒီတခုပဲ ရှိတာကို မဖြစ်မနေ လက်ခံ ရတာ။’
ပထမအကြိမ် တောင်တန်းပေါ် တက်လာခဲ့ချိန်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန် အမှတ်ရပြီး ကျွန်မ ပြုံးမိတယ်။
မနက် ကိုးနာရီ ထွက်မယ် ပြောထားတဲ့ ခရီးသည်တင်ကား ဟာ မွန်းတည့် ဆယ်နှစ်နာရီ အထိ စက်နိုးသံ မကြားတဲ့အခါ တခြားသော ရွေးချယ်စရာ ကို ကျွန်မ မေးမြန်းစုံစမ်းတယ်။ ရှာ မရ။ နောက်တမျိုး ရွေးချယ်ခွင့် ရယ်လို့ မရှိ။ ခရီးဖော်များကို အကဲခတ်တော့ ပူပင်ကြောင့်ကြဟန် မမြင်ရ။ သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ဆိုတဲ့ စကား မကြားဖူးကြတဲ့ အလား အေးအေးသက်သာ ရှိကြတယ်။ ကျွန်မ ကလွဲလို့ ထ လိုက် ထိုင်လိုက် လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ ဗျာများနေသူ တယောက်မှ မရှိဘူး။ ညနေစောင်းချိန် ကားထွက်မယ်ဆိုရော၊ ခြေနင်းချစရာ မရှိအောင် တကားလုံး ကုန်အပြည့် ဖြည့်ထားပြီးပြီ။ အထုပ်ကြီးငယ်ပေါ် နင်းဖြတ် ကျော်လွှား ပြီး နေရာယူချိန် မှာလည်း အပြုံးမပျက်ကြ။ တသောသောနဲ့ ရယ်မော နှုတ်ဆက် ပြောဆိုနေလိုက်ကြသေး။
တောင်ပေါ်မြို့တော်ကနေ ကျွန်မ သွား ကြည့်ရမဲ့ ရွာတွေကို ခရီးဆက်တော့ ပိုတောင် ရယ်ချင်စရာ ကောင်းသေးတယ်။ တပတ် နှစ်ရက်သာ ရှိတဲ့ ခရီးသည်တင်ကား ဟာ မနက် ရှစ် နာရီထွက်မယ် ပြောထားပေမဲ့ ခရီးသည်အပေါင်းဟာ အိမ်ပြန်ပြီး နေ့လယ်စာ ပြန်စား တရေးတမော အိပ် နေလို့ ရသေးတယ်။ မနက်က လိုက်မယ် ပြောထားတဲ့ သူတွေကို ထွက်မယ်ဆိုမှ လိုက်ခေါ်ကြတယ်။ ခုနှစ်နာရီခွဲ ကတည်းက ကားဂိတ်မှာ စောင့်နေတဲ့ ကျွန်မ တယောက်သာ အူချာချာ နဲ့။ အခုမှသာ ရယ်ချင်စရာလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် ဟိုတုန်းကတော့ ဒေါပွလိုက် စိတ်လျော့လိုက်နဲ့ ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေခဲ့တာ။
မိုင်လေးဆယ်ခရီးကို နေ့ တဝက် ကုန်အောင် သွားရပြီး ကားက ဝန်အပြည့်နဲ့ တောင်ပေါ် မတတ်နိုင်လို့ လမ်း ဆင်းလျှောက်ရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။ ဒါတောင် တပတ် နှစ်ရက်ပဲ ကား စီးခွင့် ရှိတယ်။ ကြားရက် ဆိုရင် အငှားဆိုင်ကယ်ကိုသာ အားကိုးရတယ်။ အိန္ဒိယကွမ်းထုပ် နဲ့ ဆေးရွက်ကြီး အနံ့ စွဲနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမား ကြောင့် ပထမဆုံး စီးတဲ့အချိန်မှာ လမ်းဘေးမှာ ဆင်း အန် ခဲ့ ရတယ်။ ကျောက်ခင်းလမ်းကြမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်ဆောင့်လို့ တကိုယ်လုံး လှုပ်မရအောင် နာကျင်ခဲ့ဖူးတယ်။ မှတပါး ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ နံသည် နာသည် ဟူ၍ အဆာ မကျယ်နိုင်။
ဒီခရီးမှာ ရို့စ်နဲ့ ဆုံကြတာပဲ။ ရို့စ်က ဘားကောလိပ်က ကျောင်းပြီးလို့ သူ့ ဘိုးဘွား ရွာကို ခဏ ပြန်လာနေချိန် ဖြစ်တော့ အကူအညီ ရနိုင်တယ်လို့ ရွာ ကော်မတီက ယူဆပြီး ကျွန်မကို သူ့ အိမ် ပို့ လိုက်တယ်။ ဆေးခန်း ဆောက်လုပ်ရေး ကိစ္စနဲ့ ရွာမှာ အတော်ကြာကြာ နေရတော့ သူနဲ့ ရင်းချာ လာတယ်။ ရွာအဝင် တောအုပ်အုပ်လေးဆီ ညနေတိုင်း လမ်းလျှောက်ထွက်ကြရင်း စကားတွေ ပြောကြတယ်။
မွေးဖွားကြီးပြင်းရာအရပ်၊ ကျင်လည်ရာ ဝန်းကျင်၊ အမူအကျင့် သဘောထား သွင်သွင် ခြားနားကြသူ နှစ်ဦးဟာ ချက်ချင်းလိုလို စိတ်နှလုံး နီးကပ်တဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ တောင်ပေါ် မြို့တော်က သူ့ အိမ်ဟာ ကျွန်မရဲ့ အခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်လာတယ်။ ကာလ အပိုင်းအခြား တခုမှာ နေ့နေ့ညည တပူးတွဲတွဲ ရှိနေတတ်ပြီး၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အသံဗလံ မပြုဘဲ ကြာမြင့်စွာ နေချင် နေတတ်ကြတယ်။ သို့ပေသိ စိတ်နှလုံးကတော့ ရင်းချာဆဲ။
‘ကျနော်တို့ မိသားစု ဒီမြို့က ထွက်သွားချိန်မှာ၊ ကျနော် တော်တော် ငယ်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သစ်တင် ကားကြီး စီး ရတာ၊ လမ်းအကွေ့ မှာ ထင်းရှုးတော ဝေးကျန်ခဲ့တာကို မှတ်မိနေတယ်။ မေ့ မသွားဘူး။ ကျနော် တောင်တန်း ပေါ်မှာ မွေးပေမဲ့ မြေပြန့်မှာ ကြီးလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် သွေးသားထဲ စိမ့် ဝင်နေတာ….. ကျနော်ဟာ တောင်တန်းပေါ်က လူပဲ။ ကျောင်းပြီးတော့ ဒီ ပြန် လာတာ သူတို့ နားမလည်ကြဘူး။ အဘိုး ရွာမှာ သွား နေတာကို အချိန် ဖြုန်းတယ် ထင်ကြတယ်။ ကျနော် ရဲ့ ရင်းမြစ်ဟာ တောင်ပေါ်မှာပဲ။ ဒီမှာဆို ကျနော် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ အမြဲ တွေး နေတယ်။’
စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်မှု ပြုနိုင်တဲ့ ဝေးမြေရပ်ခြားသို့ အခြေချ တဲ့ သူ့ မိသားစုများနဲ့ တခုတည်းကိုသာ မဖြစ်မနေ လက်ခံရမယ့် အရပ်ဆီ ပြန်လှည့်လာတဲ့ ရို့စ် ဟာ ကွာခြားခဲ့ပြီ။
သူက ခွန်အားအပြည့်နဲ့ တောရိုင်းနှင်းဆီပါ။ ဘယ်သူကမှ ပြုပြင်စီရင်လို့ မရတဲ့ သဘာဝ နွယ်ရိုင်း ပန်းပွင့်။ ကျွန်မ နှစ်လိုစွာ ကျေနပ်စွာ ကြည့်ချင်တဲ့ ပန်းပွင့် နှင်းဆီ ပဲ။
‘ကဲ မီးလျှံ ပန်မဲ့ မမရေ… တို့ တွေ ညနေစာ ဘာစားရင် ကောင်းမလဲ။ ခရမ်းချဉ်သီး သုပ်စားရင် ကောင်းမလား။ နံနံပင်လေး ပါးပါးလှီး ထည့်မယ်။ အခင်းထဲ ဆင်းခူးရအောင်။’
တောင်ပေါ်မြို့တော် အခြေစိုက် စခန်းအိမ်မှာ ကျွန်မတို့ အနှစ်သက်ဆုံး နေရာ ဖြစ်တဲ့ စိုက်ခင်းဆီ နှစ်ဦးသား လျှောက်သွားကြတယ်။ ရို့ စ် ရဲ့ ခြံထဲမှာ ဂေါ်ဖီ ဆလတ် မုန်ညင်း တရုတ်နံနံ မြန်မာနံနံ အာလူး ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူ အကုန် စိုက်ထားတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူက နှုတ်လို့ ရနေပြီ။ အနီက မရသေး။ အာလူးခင်း ကတော့ စိုက်ခါစ။ ခြံ စည်းရိုးတလျှောက်မှာတော့ နှင်းဆီရောင်စုံတွေ အစွမ်းကုန် ပွင့်နေကြတယ်။
နေ စောင်းလာပြီ။ နွေရာသီ ပေမဲ့ နေ့လည် နှစ်နာရီကျော်လာတာနဲ့ လေထု ဟာ သိသိသာသာ အေးလာတယ်။ ညနေ မြူပြာပြာ ကြောင့် အဝေးက တောင်တန်းတွေကို မမြင်ရတော့ဘူး။ သီးမစ်လွင်ပြင်သူ ပန်းနွယ် နှင်းဆီဟာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ဝါးခြမ်းပေါ်မှာ ငိုက် ကျ လျက် ရှိနေတယ်။
မိုးမြူ ကြောင့် ရှေ့ လမ်းကွေ့ ကို ပင် မမြင်ရ။ ထင်ရှုးတောထဲ တောင်ခိုးတွေနဲ့ ပိတ်ပိတ် မှောင်လို့။ မိုးမြူ နဲ့ တောင်ခိုး ရောယှက် လျက် မြင်ကွင်းတခုလုံး ဝိုးတဝါး ဖြစ်နေတယ်။ ကိုပါကျဲက ကား ဟွန်းကို အဆက်မပြတ် တီးရင်း တကွေ့ ပြီး တကွေ့ ဖြတ်တယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းက ဒီလမ်းပေါ် မောင်းနေပြီး ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိသလဲ မျက်စိမှိတ်ထားတောင် သိ သူ ဖြစ်လို့သာ ဒီလို မောင်းနိုင်တာပဲ။
‘ကိုပါကျဲ ဖြည်းဖြည်း မောင်းပါရှင့်။ ကျွန်မတို့ ဝူခုန်းလို တိမ်တွေထဲ ရောက်နေပြီ။’
‘ဆရာမတို့ပဲ ဒီနေ့ နေ့ချင်းပြန် ချင်တာဆို။ ဗားရ် ကျော်ပြီး ဟိုဘက် ဆင်းရအုန်းမှာလေး …’
ကိုပါကျဲ ဟာ သူ့ ကား အရှိန်ကို မလျော့ ဘူး။ ကျွန်မ ဆိတ်ဆိတ်ပဲ နေလိုက်တော့တယ်။ ရို့ စ် က ထိုင်ခုံနောက်မှီ မှာ ခေါင်းတခြမ်း စောင်းတင်ပြီး အိပ်ပျော်နေတယ်။ စိတ်အေးလက်အေး ရှိလိုက်လေ။ မိုးကာလ တောင်ပေါ် ခရီးဟာ ဘယ်လောက် စိတ်မအေးစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ။ ကားလမ်း ဟာ ချောက်နက်နက် ထဲ ပြိုဆင်းပြီး အချိန်မရွေး ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ မိုးများလေ စိတ်ပူရလေပဲ။ ဘေးက ချောက် ဆီ ရောက် ရောက် သွားတဲ့ အကြည့်ကို မထိန်းနိုင်ဘူး။
မိုးဖွဲလေး ရွာလာပြန်တယ်။ မိုးရွာတော့ မြူ ကျဲ သွားတယ်။ တောင်ခိုးတွေဟာ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့။ ရေကျသံ တဝုန်းဝုန်း အရင် ကြားရပြီး ကား လမ်းကွေ့ အလွန်မှာ ရေတံခွန် အသေးတခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကားလမ်းနံဘေးက သစ်ပင်တွေဟာ စိမ်းမြ သစ်လွင်နေတယ်။ မြူ ပါး သွားလို့ ဘေးပတ်လည် မြင်ကွင်းကို တဖန် ပြန် မြင်ရ ပြန်တယ်။ အောက်ဘက် ချိုင့်ဝှမ်းထဲက လှေခါးထစ် စိုက်ခင်းတို့မှာ ရေအပြည့်နဲ့။ ကောက်ပင် တို့ ရှင်သန် စိမ်းမြလို့ ။ အလေ့ကျ ပေါက်နေတဲ့ ချုံပုတ်ဆန်ဆန် ခရမ်းရင့်ရောင် ပန်းရုံတောတွေကို တလမ်းလုံး မြင်ရလာတယ်။ ထင်းရှုးတောထဲက လွင့် တက်လာတဲ့ တောင်ခိုးတွေဟာ ခရမ်းရင့်ရောင် ပန်းပွင့် ကိုင်းဖျားမှာ ချိတ်တွယ်လျက်။
ကားလမ်း ဘယ်ဘက်မှာ တောင်ခိုးနဲ့ မိုးမြု ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ ဇိန်မှု တောင်တန်းကို မြင်လိုက်ရတယ်။ ရမ်းထလိုရွာ မှာ ကား ရပ်လိုက်တော့ ရို့ စ် နိုးလာတယ်။ ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ကျနော့် ကင်မရာရော လှမ်းမေးရင်း သူ့ဘာသာ ရှာ တယ်။ တွေ့တာနဲ့ လမ်းတဘက်ကို ကူးသွားပြီး ဓာတ်ပုံ သွား ရိုက် နေတယ်။
သားဖွားခန်း ဆောက်လုပ်နေတဲ့ တောင်ကုန်းလေးဆီသို့ ကျွန်မ တက် သွားတော့ တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ရုံး ကားတစီး ရပ်ထားတာ တွေ့တယ်။ အပြာညစ်ညစ် ပြောင် ဘောင်းဘီအရှည် နဲ့ ဆင်တူ ရှပ်အကျီ ကို အပြင်ထုတ် ဝတ်ထားတဲ့ လူတယောက်နံဘေးမှာ ရွာ ကော်မတီ လူကြီးတွေက ရပ်လျက် ရှိနေကြတယ်။ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တဦးက ကျွန်မနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးလို့ ခေါင်းငြိမ့် ပြုံးပြလိုက်ပြီး စကား ဆက် ဆို စရာ မရှိတော့တာနဲ့ တောင်ကုန်းပေါ် ဆက် တက်လာခဲ့ကြတယ်။ ကိုပါကျဲက နောက်က ကပ် လိုက်လာပြီး ဆုပေးဒဏ်ပေး လူတွေလေ ဆရာမ လို့ မမေးဘဲ ပြောတယ်။
‘ဘာလဲ ကိုပါကျဲ၊ ဆုပေးဒဏ်ပေးဆိုတာ။’
‘အဲဒီလူလေ.. မြေပြန့်မှာ စား လွန်းလို့ အတိုင်ခံရတာ။ နောက်တော့ ဒဏ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ဆီ ပို့လိုက်တယ် လေ။’
ကိုပါကျဲ ဆက်မပြောတော့ဘူး။ သူ ဆက်မပြောပေမဲ့ ကျွန်မ က တော့ ဆက်ရန်ရှိ အတွေး တွေ ပလုံစီ ထ သွားတယ်။ ကိုပါကျဲ ရင်ထဲမှာ ကော၊ ဘယ်လို ဆူးတွေ ဘယ်လောက် ပေါက်နေပါလိမ့်။
ဆေးခန်းတောင်ကုန်းလေးပေါ်က ကြည့်လိုက်ရင် စိမ်းလန်းတဲ့ တောင်စဉ်တောင်တန်းတွေကို ရှုမဆုံး မြင်ရတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသူတွေကို ပို့တဲ့ နေရာ တဲ့လား။ ဇိန်မှုတောင်တန်းတွေကို ကျွန်မ အားတုံ့ အားနာ ဖြစ်ရတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းဂိုဒေါင်မှာ ကျွန်မ စာရင်းစစ်နေချိန် ရို့ စ် ပြန်ရောက်လာပြီး ကျနော် ဘာ ကူ လုပ် ရမလဲ လာမေးတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါ၊ တံဆိပ်ပါတဲ့ ဟာဆို ထင်ရှားအောင် ရိုက်ပေး လို့ ကျွန်မ က ပြန် ဖြေ လိုက်တယ်။
ကျွန်မ အလုပ်ပြီးလို့ ပြန်ထွက်လာတော့ ရို့ စ် ဟာ ဝင်းထဲက မြေမှာ ကပ်ပေါက်နေတဲ့ အရိုင်းပင်ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက် နေတယ်။ အရွက်က မုန်ညင်းနဲ့ တူပြီး ပန်းပွင့်သေးသေးလေးတွေက ခရမ်းဖျော့ရောင် လဲ့ နေတယ်။ အခုတလော ရို့ စ် ဟာ သူ နောက်လုပ်မဲ့ အလုပ်အတွက် ရာသီအလိုက် ပွင့်ကြတဲ့ ပန်းတွေကုို ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်း တင် နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သူ့ အာရုံဟာ တောင်တန်းပေါ်က ကျောက်စာတိုင်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အလုပ်ဆီ နစ်ဝင်နေတယ်။
ရမ်းထလိုက ထွက်ခဲ့ပြီး မဏိပူရမြစ်နဲ့ တောင်စဉ်တောင်တန်း အထပ်ထပ်တွေကို မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းသာကို ရောက်တော့ သူ ဓာတ်ပုံ ဆင်းရိုက်ပြန်တယ်။ ဒီလမ်းတွေကို သူ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် သွားနေတာ အခေါက်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်အောင် ရှိနေပြီ။ ဒီနေရာတွေကို သူ ရိုက်နေတာလည်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ရှိနေပြီ။ တိမ်တွေ တောင်တွေ အရောင် မတူဘူး မစုရဲ့၊ ရိုက်ထားမှဖြစ်တာ လို့ ပြောတတ်တယ်။
မဏိပူရမြစ်ရေ ဟာ မိုးတွင်းဖြစ်လို့ အညိုရင့်ရင့် အရောင်ပေါက်ပြီး နောက်ကျိနေတယ်။ ဗားရ် တံတားရှိရာ ချိုင့်ဝှမ်းကို ဆင်းလာတော့ လေ ဟာ သိသိသာသာ ပူနွေး သွားတယ်။ ဗားရ်မှ ပြန်အတက်၊ လမ်းဘေးက သစ်တောအုပ်ဟာ မိုးရေသောက်ပြီး စိမ်း ဖန့် နေ တယ်။ ကားလမ်းဟာ တဖြည်းဖြည်း မြင့်လာပြီး ထင်းရှုးတောကို ပြန်မြင်ရချိန်မှာတော့ လေထု ဟာ အေးစက် လာခဲ့ပြီ။
သီးဆန် ကျောင်းဟာ လက်စသပ်နေပြီ။ ဖွင့်ပွဲကို အလှုရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လာနိုင်မယ့် ရက်မှ လုပ်ချင်လို့ ရွာ ကော်မတီဟာ စောင့်ဆိုင်းနေတယ်။ အလှုရှင်နိုင်ငံ တံဆိပ်ဝိုင်း နေဝန်းနီ တွေ ကပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂများ နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေဟာ သစ်သစ်လွင်လွင် တောက်တောက်ပပ။ အလှုရှင် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဟာ ဝေးမြေရပ်ခြားက သာမန် နိုင်ငံသားများ မူးစုပဲစု ထည့်ဝင်ထားတဲ့ အလှုငွေတွေကို စိတ်ချယုံကြည်ရမယ့် အဖွဲ့ တွေက တဆင့် ဒီဒေသဆီသို့ မယိုမဖိတ် အရောက်ပို့ရတယ်။ ဆုပေးဒဏ်ပေး ကိုယ်တော်များက တဆင့် ဆိုရင်တော့ ယို လိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း။ ယုံကြည်ခံရသူ တဦး အဖြစ် ကျွန်မ ပါဝင်ရတာ ဝမ်းမြောက် ပေမယ့် ယုံကြည်ခံရမှု မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာလည်း ကိုယ့် နိုင်ငံသားတွေပဲ ဖြစ်နေလေတော့ စနောင့်စနင်း စိတ် လည်း ဝင် တယ်။
ယုံကြည်ခံရမှုဟာ ဘယ်လောက် တန်ဘိုးကြီးလိုက်သလဲ။ ယုံကြည်ခံရခြင်းရဲ့ချိုမြိန်မှု ကို ဆုပေးဒဏ်ပေးတွေ မသိကြဘူး။ ယုံကြည်ပေးသူ နဲ့ ယုံကြည်ခံရသူ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုမှု ရိုသေမှု ရှိမှ ဖြစ်ထွန်းလာကြမှာ။ ယုံကြည်ခံရတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ဘက်က ပြန် တာဝန်ယူရတဲ့ ကျေပွန်မှု ပါလာပြီ။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ယူရုံသာ ဖြစ်လို့ သီးဆန်က ချက်ချင်း ပြန်ထွက်လာနိုင်တယ်။ မိုး ဖွဲလေး ကျ လာပြန်တယ်။ ကိုပါကျဲ ကားအရှိန်ဟာ အလာတုန်းကထက် ပို များ နေတယ်။ လမ်းအချိုး တခုက တောင်စောင်းနံရံတလျှောက်မှာ ပန်းဖျော့ရောင် အရွက်နု သစ် ဝေ တဲ့ အပင်တွေကို လှမ်း မြင်လိုက်ရတယ်။ ကားရပ်ပေးဖို့ ရို့ စ် လှမ်းအော်လိုက်ချိန်မှာ အတော် လွန်သွားခဲ့ပြီ။ ကား ရပ်တာနဲ့ ရို့ စ် သွက်သွက် ဆင်းသွားပြီး လမ်းအကွေ့ ကို ပြန်လျှောက်သွားတယ်။ ကျွန်မ နောက်က လိုက်သွားတော့ ဆင်ခြေလျော တောင်စောင်းမှာ ပေါက်နေတဲ့ ပန်းနုဖျော့ ကျောက်ခက်တောကို စိမ်ပြေနပြေ ဓာတ်ပုံရိုက်နေလေရဲ့ ။
မိုးသားတိမ်တိုက်ကြောင့် ညနေခင်း အမှောင်ရိပ်ဟာ စော ရောက်လာတယ်။ ကိုပါကျဲက ကျွန်မတို့ကို တောင်ကုန်းလမ်းထိပ် အထိ ပို့ ပေးတယ်။ ကျွန်မကို ကားခဘောက်ချာ ထုတ်ပေးဦးနော် ကိုပါကျဲ ဆိုတော့ အေးဆေးပါ ဆရာမ၊ နောက်ရက်မှ ပေးမယ် ပြောရင်း ကားမောင်းထွက်သွားတယ်။ ရို့ စ် ရဲ့ အိမ်က တောင်ကုန်းအမြင့်လေးမှာ ရှိတော့ တက်လာကြရင်း မောလို့ လမ်းတဝက်မှာ ခဏ နားရသေးတယ်။
လေတိုက်ခံလာရလို့ ဖွာ နေတဲ့ ရို့ စ် ရဲ့ မဟော်ဂနီရောင် အသွေးကျကျ အနီရောင် ဆံပင်တွေကို ကျွန်မ အာရုံစိုက်မိတယ်။ မှောင်ရီစ ပြုနေတဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးဟာ သူ့ ဆံမျှင်မီးလျှံ ကြောင့် လင်းနေတယ်။
ခြံအဝင်ဝ ခုံတန်းအရောက် သူ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်လိုက်တယ်။ ကျွန်မက အိမ်ထဲကို ဝင်သွားပြီး ရေ သောက်တယ်။ သူ့အတွက် တခွက် ကိုင်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကျွန်မဆီက လှမ်းယူတယ်။ ခုံတန်း နောက်မှီပေါ် ခေါင်းတင်ပြီး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ မိုး တိမ်တိုက် တွေကြောင့် ကောင်းကင်ဟာ မှိုင်းမှုန်မှုန်။ ညနေကြယ်လေး တလုံးတလေကိုပင် မမြင်ရ။
‘မစု ညကျရင် ဆေးရုံရှေ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို သွားရအောင်။’
‘ညဘက် ဆိုင်ကယ်စီးရင် အေးလွန်းလို့ အပြင်ကို မထွက်ချင်ဘူး။ ဆေးရုံရှေ့ ဆိုင် ဘာလို့ သွားချင်… အော် သိပြီ ။ ဟင်း ဟင်း။’
နွေရာသီ လူငယ် သင်တန်းမှာ လာရောက် ကူညီပေးသူ ဆရာဝန်တယောက် နဲ့ သူ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်လာတာကို ကျွန်မ သိထားပြီးသား။
‘ဘာလဲကွာ… ကောင်မလေး။ အိမ်ခေါ်လာ မိတ်ဆက် ပေးလေကွာ။’
‘အဲလို အဆင့် မရောက်သေးပါဘူး။ နည်းနည်း ရင်ခုန်နေတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားအလာ ကို တွက်နေတာ။’
သူ့ မျက်နှာ ရွှင်ချိုချို ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်မ ပြုံးမိတယ်။
မဖြစ်ရင်ကော လို့ ကျွန်မ ပြောတော့ ရို့ စ် ဖြေပုံက သင်းတယ်။ မဖြစ်ရင် ဒိုး လိုက်ပေါ့ တဲ့။
စိတ်မရှုပ်ဘူးလား ရို့စ် ရယ် လို့ ကျွန်မက မေးလိုက်တော့….
‘ကျနော်က စိတ်ရှုပ်စရာ တမင်ရှာဖွေ နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီလိုပဲ သွားလာရှင်သန်ရင်း ရင်ခုန်စရာနဲ့ တွေ့ တော့ ခုန်မိတာပဲ။ ချစ်စိတ်ဝင်လာရင် ချစ်မှာပဲ။’
အသည်းကွဲပြီး လူးလှိမ့်နေတာလဲ ထည့်ပြောလေ လို့ ကျွန်မက ဆိုတော့ ……
‘ဟုတ်တယ်လေ။ ကွဲချိန် ကျနော် ငိုရတယ်။ နောက်တော့ ပြီးသွားတာပဲလေ။ ခု ကျနော်မှာ ရင်ခုန်စရာ ရှိလာတော့ ကျနော် ခံစားလိုက်တာပဲ။ သဘာဝအတိုင်း သူ့ အပိုင်းအခြား နဲ့ သူ ရှင်သန်တာလေ။ တခြားလူတွေလည်း ဒီလိုပဲ နေထိုင်ကြတာ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့် နုပျိုချိန် ကို နှမြောစရာ။’
‘ပျိုမြစ်နုနုယ်မှုဆိုတာ ခိုင်မြဲတာမှ မဟုတ်တာ။ နှမြောစရာရယ်လို့ မထင်ပါဘူး။’
‘ဟုတ်တယ်။ မခိုင်မြဲလွန်းလို့ ပို နှမြောတာ။ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားလေးတခုမှာသာ နုပျိုခွင့် ရှိတာနော်။ အဲဒီ ကာလမှာ ငယ်ရွယ်သူ ပီပီ နေရမှာ မစုရဲ့ ။ နှမြောတသ ဗောင်ရောင်း တော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။’
‘မစု ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပန်းလေ။ နွေဦးမှာ ပွင့်တဲ့ ခရမ်းရောင် စွယ်တော်ရိုင်းတွေ။’
ရို့ စ် က ကဗျာတပိုင်းတစ ကို ထ ရွတ် တယ်။
ထင်ပေါ်လွန်းလှပေရဲ့  ထင်ပေါ်လွန်းလှပေ
နွေလွန် နွမ်းရိ ရွက်ညိုတို့ဆီ
အစွမ်းကုန် မြူးထူး ပွင့်အာနေတဲ့ နှောင်းပန်း
နှမြောတသ ဖြစ်မိပေါ့ ဗောင်ရောင်း(ရယ်)
နွမ်းရိ ရော်ရွက်ဝါညိုတို့ ဆီမှာ။ ။
‘ အိုင်းဒီး ရဲ့ နှမြောတသ ဗောင်ရောင်း တဲ့ ။ ကျနော် အဲဒီ ကဗျာ ဖတ်တိုင်း လူ့ ဘဝရဲ့ ကာလ အပိုင်း အခြား အလိုက် ကွက်တိဖြစ်မှု ကို တွေး မိတယ်။ သူ့ အချိန် နဲ့ သူ မပွင့်ခဲ့ရင်၊ မရှင်သန် ရင် နှမြောတသ ဖြစ်ရတယ်။ ဟို စာချိုး ရှိတယ်လေ… ချိန်ခါမလင့် ပန်းနှယ် ပွင့် ဆိုလား… ဟား…ဟား ။’
ရို့ စ် က ပြောရင်း ရွှင်ရွှင်ပြပြ ရယ်မောလိုက်တယ်။
ဒီ ရေမြေ မှာ ကျင်လည်နေထိုင်တာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်မ နှမြောတသ ဖြစ်ရတဲ့ အရာတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လာရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ နှမြောတသပန်း အကြောင်း ကြားရင် သူ ဒီလို ရယ်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီဒေသက လူတွေ နေ့တိုင်းလိုလို ထင်းအဖြစ် သုံးပြီး မီးရှို့ နေရတဲ့ သစ်တောစိမ်းစိမ်းတွေ၊ အမျိုးအမည် စုံလင်လှတဲ့ သစ်ခွ ရောင်စုံတွေ၊ ထင်းရှုးတောထဲက အရိုင်းပန်းတွေ၊ တောလုံးလင်းဖြာ ပွင့်ကြတဲ့ စွယ်တော်ရိုင်း နဲ့ ပန်းချယ်ရီတွေ။
‘တုိ့ ရဲ့ နှမြောတသပန်း က ဒါတွေ ရို့ စ်ရဲ့။ ဒီလောက် လှတဲ့ တောတောင်ရေမြေကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရပြီး ဘာမှ အသုံး မချနိုင်တာကို နှမြော တာ။ ရိုးရာထုံးစံတွေနဲ့ သဘာဝ အတိုင်း ရှိနေတာလေး ကြည့်ပါ ခံစားပါ လို့ လာလည်တဲ့ သူတွေကို ဆွဲဆောင်လို့ ရတယ်။ အခု ရှင် ဂျပ်ခုတ်သမား တွေ စုပြီး အထည် ရက် နေတာ၊ အဲဒါ ခေါ် ပြ ရုံ နဲ့တင် အလုပ် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကို လွယ်လွယ်ကူကူ လာနိုင်ဖို့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး။ ရေ၊ မီး နဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ။ ဒါတွေ ရှိမှ ဖြစ်မှာ။ သိနေမြင်နေရက်နဲ့ မလုပ်နိုင်ကြတာ စိတ်ထဲ နင် တယ် ရို့ စ် ရဲ့ ။’
‘ကျနော်ကကော မနင်ဘူး ထင်လို့လား။ ကျနော် သိသလောက် တချို့ နေရာမှာ လုပ်နေကြတာ ဒေသခံတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ ဒီကလူ တွေ လက်မှာ မရှိဘူး။ ဒီတော့ အခုလိုမျိုး ဟိုကလှု ဒီကကူ ဖြစ်နေရတာ။ မစု လဲ ဒါကြောင့် ဒီကို ရောက်လာတာလေ။’
‘ဟုတ်တယ်။ တို့ လဲ သူများတိုင်းပြည် တောင်ပေါ်ဒေသတွေကို ပိုက်ဆံ သွားပေးပြီးမှ ဒီကို ရောက်ဖူးတာ။ ဒါတောင် အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မို့ လာဖြစ်တာနော်။ သူများနိုင်ငံတွေ သဘာဝအတိုင်း နဂို ရှိရင်းစွဲလေး မပျက် အောင် ထိန်းသိမ်းထားရုံနဲ့ စီးပွားဖြစ်နေကြတာ။’
‘အင်း။ ကျနော် မစု ကို ပြောဖို့ မေ့နေတာ ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ ရှုခင်းသာ က ကျောက်စာတိုင်တွေကို ဖြို ပစ်လိုက်ပြီ။ အဲနေရာမှာ မြို့ သာယာရေးအဖွဲ့ က စတီး လက်ရန်းတွေနဲ့ အကုန် ကာ ပစ်လိုက်ပြီ။’
မျိုးနွယ်စု တစ်ခု ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သင်္ကေတ အဖြစ် ထားရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်စာတိုင်တွေကို လွယ်လင့်တကူ ဖျက်ဆီး ပစ် နိုင်တဲ့ အသိအမြင် မဲ့ စိတ် ကို ထိတ်လန့်တကြား ဖြစ်ရတယ်။ နှစ်ပရိစ္စေဒ ကြာညောင်းလှတဲ့ ကျောက်စာတိုင်ရဲ့ တန်ဘိုးအမှန်ကို သိမြင်သူ မရှိကြတော့ဘူးလား။
စတီးလက်ရန်းကို ကြည့်ဖို့တော့ ဘယ်ဧည့်သည်ကမှ မိုင်ထောင်ချီ အပင်ပန်းခံပြီး လာမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ကျွန်မ ပြောလိုက်တော့ ရို့ စ် က ကျနော် သိတယ် ဖြေကာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဟန်နဲ့ ခေါင်းခါတယ်။
ကျောက်စာတိုင် ဖြိုချမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အင်အား ကျွန်မ မှာ မရှိသလို ရို့ စ် ထံမှာလည်း ရှိ မနေပါ။
ကျွန်မ ရော သူပါ သက်ပြင်းကိုယ်စီ ချ လိုက်တယ်။ ကောင်းကင်မှာ အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်ပြီး သိသိသာသာ မှောင် လာပြီ။ လေထုထဲ မိုးငွေ့ ပါလာတယ်။ ဒီည မိုး မများပါစေနဲ့။ လမ်းပန်း အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားရင် ဒီအရပ်ဟာ စွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး အထိ ဆိုက်ပေါင်း များပြီ။ ဆုတောင်းရုံကလွဲလို့ တခြား ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့ နေ့တွေ ညတွေ ရှည် လှပြီ။ ကျွန်မ နင် တယ်ဆိုတာ ကိုပါကျဲ တို့ ရို့ စ် တို့ နဲ့ စာရင် ပမာဏ နည်းပါတယ်။ ခဏတဖြုတ် လာသူတွေ စာနာတယ်ဆိုတာကလည်း အရှိန် တက်တုန်း ခဏပါ။ ဒီက ခွာပြီး ကြာလာရင် ကျွန်မလဲ အမေ့မေ့ အလျော့လျော့ ဖြစ်သွား အုန်းမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ရို့ စ်ဟာ သူ့ ရင်းမြစ်ဆီကို ပြန်လာခဲ့တာပဲ။ ဒီက အသံကို ဘယ်လောက်အထိ ကြားအောင် သူ လွှင့် နိုင်သလဲ။ သူနဲ့ အတူ ဘယ်သူတွေ ပြိုင်တူ လွှင့် နိုင်သလဲ။ ပန်းနွယ်ရိုင်း နှင်းဆီ ရှင်သန်လှုပ်ရှား ရမဲ့ ခရီးက ရှည်လျားတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခံထားပါ ရို့ စ်ရေ။ ကျွန်မ က အားပေးရုံ တော့ တတ်နိုင် ပါသေးတယ်။
အတန်ကြာတော့ ရို့ စ် က ခုံတန်းပေါ်က ထ သွားပြီး ပန်းနွယ်နှင်းဆီအပင် ကို သွားကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မ ရေခွက် ယူပြီး အိမ်ထဲမှာ သွားထားတယ်။ မျက်နှာသစ်ဖို့ ခြံထဲက ရေတိုင်ကီ ရှိရာကို ပြန်ထွက်လာတယ်။ ဖလားထဲက ရေ ဟာ ရေခဲရေတမျှ အေးစက်နေပြီ။
ရို့ စ် ဟာ နှင်းဆီပင် ဘေး ရပ်နေတုန်းပဲ။ သီးမစ်လွင်ပြင်သူ ပန်းရိုင်းနှင်းဆီပင်ဟာ အညွှန့်တွေ လူ လာပြီး ချည်နှောင်ထားတဲ့ ဝါးခြမ်းဆီက ရုန်းထွက် နေကြပြီ။ အမိုးခုံးလေးဆီ ရောက်ဖို့ ကြိုးတွေ နဲ့ ထပ် ချည်နှောင် ရအုန်းမယ်။
နောက်ဆုံး စာရင်းသွင်းချက် ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာကို ပိတ်လိုက်တယ်။ ဖုံ အခင်းထူထူ ပေါ် လှဲ အိပ် လိုက်တာ့ ပကတိ သန့်သန့်စင်စင် အပြာရောင် ကောင်းကင်ကို မြင်ရတယ်။ တိမ်မျှင် တစတလေမှ မတွေ့ရဘူး။ ကောင်းကင် ဟာ လွင် နေအောင် ပြာ ­­တယ်။ ဒီည ပိုအေးမှာပဲ။
ဝရန်တာ ဒေါင့် မှာ ဆင်ထားတဲ့ ဂျပ်ခုတ် ရှေ့ က ရို့ စ် ကို ငဲ့ စောင်း ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ ဒီအထည်ကို ယက်နေတာ အတော်ကြာပြီ။ အနီ နဲ့ အစိမ်း ဖောက်ထား တော့ ခရစ်စမတ် အရောင်အသွေး ဆန် နေတယ်။ ဒီတလောမှာ ရို့ စ် ဟာ တခုခုကို အတွေးနက် နေဟန်နဲ့ ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် ဖြစ်နေတယ်။ လေပြည် တိုက်လာတဲ့အခိုက် ရို့ စ် ရဲ့ နက်မှောင်တဲ့ ဆံနွယ်တွေ ကောင်းကင်ပြာ ထဲ လွင့် ပျံ ဝဲ သွားတယ်။ သူ ဆံပင် အနက်ရောင် ပြန်ဆိုးလိုက်တာ ပိုမို ကြံ့ခိုင်တဲ့ ဟန် ပေါက် တယ်။
‘ခဏ မနားချင်ဘူးလား ဟေ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် သွားရအောင်။’
ရို့ စ် ဟာ သူ့လက်ထဲက ဖြူ ဆူး ကို ခွက်လေးထဲ ထည့်လိုက်ပြီး ခါးဆန့် လိုက်တယ်။ ချည်ပင် ရေ ရာ မှာရော၊ ညီအောင် ညှိ တဲ့နေရာမှာပါ သုံးတဲ့ ဖြူ ဆူးဟာ ဂျပ်ခုတ်သမားတွေ ရဲ့ လက်နဲ့ ထိ ဖန် များပြီး အရောင်တောက်ပ နေတယ်။ ရို့ စ်က ဂျပ်ခုတ် ယက်နေရင်း သူ့ ဆံပင်မှာ ထိုးထားတတ်တော့ တန်ဘိုးကြီး ကနုကမာ ဆံထိုးလိုလို ထင်မြင်ရတယ်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်ကို ဆင်းသွားတဲ့ မြေနိမ့် ချိုင့်ဝှမ်း ဟာ ဆိုင်မရောက်ခင် လမ်းနှစ်မြွာ ခွဲထွက် သွားတယ်။ လမ်းဘေး တဘက်တချက်မှာ ပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေ တော ထ အောင် ပွင့်လို့ ။ ကျွန်မက ဆိုင်ဘက် သွား တဲ့ လမ်းသွယ်လေး ထဲ ချိုး ဝင် လိုက်တယ်။ နောက်က လိုက်လာတဲ့ ခြေသံ ပျောက်သွားလို့ ပြန် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့၊ လမ်းနှစ်သွယ် ထိပ်မှာ ရို့ စ် ရပ်နေတာ မြင်ရတယ်။ အတန်ကြာကြာ ရပ်နေပြီးမှ သူ ဆက် လျှောက် လာတယ်။
‘မစု ကျနော်ကို စာရင်း နည်းနည်း ကူ လုပ် ပေးခဲ့ဦး။ ဘတ်ဂျတ် မလောက်လို့ ကျနော် အတော် ထိ နေတယ်။’
ရို့ စ် ရေနွေးခွက်ကို ကျွန်မရှေ့ ပို့လိုက်ပြီး စကား စ တယ်။
‘အေး။ လုပ်ပေးမယ်။ ငွေ မလည်ပြန်ဘူးလား။’
‘ဟုတ်တယ်။ အထည် ထဲ ရင်းထားတဲ့ ငွေ မြုပ်နေလို့ ကျနော် အသက်ရှု ကျပ်နေတယ်။ ခေါ်ထားတဲ့ ဂျပ်ခုတ်သမားတွေကို လခမှန်မှန် ပေးဖို့တောင် ခက်တယ်။’
‘ဂျပ်ခုတ်အထည်က ဈေးကြီးပြီး တထည် ရဖို့ ကြာတယ်လေ။ ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ့ ရောင်းနိုင်ဖို့ နည်း ရှိလား။’
‘ကျနော့် ဒီဇိုင်းတွေကို ခိုးပြီး စက်နဲ့ ယက်တဲ့ လူတွေက ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းနိုင်တယ်။ လက်ယက် ကတော့ မရောင်းနိုင်ဘူး မစု။’
‘နောက်ပြီး ရှေးလက်ရာတွေ ကျနော် လို ချင်တာလေ။ အဲဒါ ကျနော် အမျိုးတွေဆီကတောင် ဝယ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အထည်ကို ကွယ်လွန်ချိန် မှာ တခါတည်း မြေမြုပ်ဖို့ သိမ်းထားကြတာ။ ဒါကို စုဆောင်းပြီး ကျနော်အိမ်မှာ ပြ ထားချင်တာ။ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အင်း….အခုနေ
သူတို့ ရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် ကျနော် မှာ အပိုသုံးဖို့ ငွေ မရှိဘူး။ ’
‘ရှေးလက်ရာ စုဆောင်းဖို့ အတွက် သတ်သတ် ခေါင်းစဉ်တခုထားပြီး ရန်ပုံငွေရှာရင်ကော’
‘အင်း ကျနော် နည်းလမ်း ရှာကြည့်အုန်းမယ်’
ရို့ စ်ကို ကြည့်ရတာ မလန်းဆန်းဘူး။ ကျွန်မ ချစ်ခင်နှစ်လိုတဲ့ ပန်းနွယ်နှင်းဆီ ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် အခြေအနေ နဲ့ အားလျော့နေတာ မမြင်ချင်ပါဘူး။
‘ရို့ စ် မနက်ဖြန် ကိုပါကျဲ ကား ခေါ်ပြီး ချယ်ရီတွေ ပွင့်နေတာ ဓာတ်ပုံ သွားရိုက်ရအောင်။’
ရို့ စ် လေးတွဲ့တွဲ့ ဟန် နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်တယ်။ မနက်ဖြန်တော့ ပြာသော ကောင်းကင် အောက်မှာ သူ ကြည်သာ ရွှင်ပြ ဖြစ်လာမှာပါ။ ရို့ စ် ဟာ တာရှည် စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း အားငယ်တတ်သူ မဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီ ကောင်းကင်ပြာအောက်မှာ ချယ်ရီပင်ဟာ ပင်လုံးကျွတ် ပွင့်နေတယ်။ ချယ်ရီပင်နံဘေးမှာ ယာတဲလေး တခု ဆောက်ထားတာ ရှိတယ်။ အနိမ့် ချိုင့်ဝှမ်းထဲက လှေခါးထစ် စိုက်ခင်းတွေ မှည့်ဝင်းပြီး ရွှေရောင် တောက်ပ နေပြီ။ ရို့ စ်က ခပ်လှမ်းလှမ်းက လမ်းကွေ့လေးဆီ လျှောက်သွားပြီးမှ ယာတဲ နဲ့ ချယ်ရီပန်းပင်ကို ဓာတ်ပုံ ပြန်ရိုက်တယ်။ သူ့ ကင်မရာထဲက မြင်ကွင်းဟာ ရင်သပ်ရှုမောဘွယ်ရာ။ တောင်တန်းပြာ၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ ရွှေရောင် လှေခါးထစ် စိုက်ခင်းများ၊ ပင်လုံးညွှတ် ပန်းချယ်ရီ နဲ့ ယာတဲလေး။ စိတ်နှလုံးထဲ အမြဲ စွဲမြဲ နေမဲ့ သဘာဝ ပန်းချီကားချပ်ပဲ။
တတောလုံး တတောင်လုံး လှိုင်လှိုင် ပွင့်ကြတဲ့ ချယ်ရီတွေကို တောင်တန်းနေသူတွေ ကြည်လင်ဝမ်းမြောက် တဲ့ စိတ်နှလုံးနဲ့ ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ခွင့် ရှိကြရဲ့လား လို့ အတွေး ဝင်လာတယ်။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ မိုးရာသီ သဘာဝဘေးကြောင့် ကုန်းမြေမြင့် ဘဝတွေ အိမ်ယာတွေ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ မြေပြိုမှုကြောင့် ကိုယ့် ခြံမြေ ကို စွန့်ခွာရသူများဟာ ဒီဆောင်းဦးမှာ ပွင့်တဲ့ ချယ်ရီကို ဘယ်လို စိတ်နှလုံးနဲ့ ကြည့်ကြ မှာပါလိမ့်။ ကျွန်မ အတွေးကို အမေးအဖြစ် ပြောင်းလိုက်တော့ …..
‘မနက်တိုင်း ခေါင်မိုးထပ်ကနေ သူတို့ နေရာချ ပေးလိုက်တဲ့ ရပ်ကွက်သစ်ကို မြင်နေရတာ။ မြင်တိုင်း ကျနော် စိတ် မချမ်းသာဘူး။ နေရာ ပြန်ချပေးရင် တကယ့်ကို စနစ်တကျနဲ့ မြို့အကွက် ပုံစံ ရှိ စေချင်တယ်။ နောက်ထပ် သဘာဝ ဘေး ဖြစ်လာရင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပေး စေချင်တာ။ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း မှာတုန်းက ပြောခဲ့တာက တမျိုး။ နောက်တော့ ပြောင်း ပြောင်း ဆိုပြီး အတင်းအကျပ် ပို့လိုက်တဲ့ နေရာဟာ ကတိ ပြုခဲ့ သလိုမျိုး မဟုတ်ဘူး။’
ရို့ စ် က မကျေမချမ်း နဲ့ ဖြေ တယ်။
‘ဒီမြို့ ကို အဝေးက ပြန်ကြည့်ရင် သိပ်လှတယ်။ ချယ်ရီပွင့်ရင် ပိုလှတယ်။ အခြားတောင်ပေါ်မြို့တွေမှာလဲ ချယ်ရီ ရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းကင်ပြာပုံ မတူဘူး။ ဒီက ကောင်းကင် ဟာ တကယ့်ကို ရာနှုန်းပြည့် ကြည်စင်တဲ့ အပြာ။ ချယ်ရီပန်းပွင့်နဲ့ သိပ် လိုက်ဖက် တာ။ ဒါပေမဲ့ ဖျက်နေတာက အိမ်တွေ။ ဆောက်ထားတာ ဟိုဘက်လှည့် ဒီဘက်လှည့် နဲ့ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး။ တောင်ပတ်လမ်းတွေကို စနစ်တကျ ဖောက်ပြီး အစီအရီ အကွက်ချ ဆောက်။ လမ်း တဘက်တချက် မှာ ချယ်ရီပန်းပင်တွေ စီတန်း စိုက်လိုက်ရင် တော်တော့် ကို လှမှာ။ လက်ရှိ မြို့ က အရင်ကတည်းက ဒီလို တည်ဆောက် ပြီးသားမို့ ထားပါတော့။ အခု မြို့ သစ် နေရာ ကို သေချာ လုပ်သင့်တာ။’
‘အင်း။ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှာ သွား ကူ နေတုန်းက ကျနော်တုိ့ရဲ့ ဆန္ဒ ကို အသေအချာ ပြောခဲ့သေးတယ်။ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ တခါတလေ ကျနော် ကိုယ် ကျနော် အားမရဘူး။ တချို့ ဟာတွေ ဒီအတိုင်း မျက်စိမှိတ် ကြည့်နေရတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်။’
‘ရှင် လုပ်နိုင်တာ အကန့်အသတ် ရှိတာကိုး ရို့စ် ရယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့် ဘာသာ အပြစ်မတင်နဲ့။’
အိမ်ပြန်လမ်းတလျှောက်မှာ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံး တိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ ရို့ စ် ဟာ အောက်ထပ်က သူ့ ဂျပ်ခုတ်သမားတွေဆီ ဆင်းပြီး အလုပ် လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မ ညနေစာ ချက်နေချိန် သူ မီးဖိုခန်းထဲ ရောက်လာတယ်။ စားပွဲမှာ ဝင် ထိုင်လိုက်ပြီး…..
‘မနက်ဖြန် ဘုရားကျောင်းက အပြန် ကျနော် ဧည့်သည် ခေါ်လာမယ်။ မစု နေ့လယ်စာ စီစဉ်ပေးမလား။’
‘ရတယ်။ ဧည့်သည်က ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ။’
တယောက်တည်းပါ လို့ ရို့ စ် က ဖြေတယ်။ ကျွန်မ က လှီးလက်စ ကြက်သွန်နီကို အသာချပြီး သူ့ ကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်လိုက်တော့ ရို့ စ် က ဟုတ်တယ် ဟိုတယောက် လို့ အတည်ပြုတယ်။
သူ မစားတာ ဘာရှိလဲ လို့ မေးလိုက်တော့ မရှိဘူး လို့ ပြန်ဖြေတဲ့ ရို့ စ် အသံက ခပ်တိမ်တိမ် နဲ့ ။
အခြောက်အခြမ်း ဘာရှိသေးလဲ မသိဘူး။ မနက်တော့ ဈေးသွားမှ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မ ပြောတော့ သူ ခေါင်းငြိမ့်တယ်။ မစု ပြီးရင် ခြံထဲ ဆင်းလာနော် လို့ ပြောပြီး ထွက်သွားတယ်။
ကျွန်မ ခြံထဲရောက်တော့ အပင်တွေကို မြေဆွ ပေးနေတဲ့ ရို့ စ်ကို တွေ့ ရတယ်။ သူ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကို ခေါက်တင်ထားပြီး ဆံထိုး တခု နဲ့ ထုံး ထားတယ်။ နက်မှောင်တဲ့ ဆံနွယ်တချို့ ဘေးကို ကပိုကရို ကျလို့။
ပန်းပင်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ရို့ စ် ဆီ မသွားဘဲ ခြံအဝင်ဝ ခုံတန်းပေါ် သွားထိုင်နေလိုက်တယ်။ ခြံ ဝင်းထဲ ပြေး ဝင်လာတဲ့ ဆောင်းလေ ဟာ ချမ်းစိမ့်စိမ့် နဲ့ ။ ဘုရားကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံဟာ အေးစက်လေထု ထဲ လေးတွဲ့တွဲ့ လွင့်ပါး လျက်။ နှစ်သစ်ကူး ရာသီ နီးလာပြန်ပြီ။
သူ့ အလုပ်ပြီးတော့ ရို့ စ် ကျွန်မ အနားရောက်လာတယ်။ ခုံတန်းပေါ် မထိုင်ဘဲ ကျွန်မ ရှေ့ ရပ်ကာ….
‘မစု။ သူ က လက်ထပ်ဖို့ ပြောနေတယ်။’
‘အင်း။ အိမ်ခေါ် လာမယ်ဆိုကတည်းက တခုခုပဲလို့ ထင်နေတာ။’
ရို့ စ် ဟာ ကျွန်မ ရှေ့ မှာ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လျှောက်နေတယ်။
‘ကျနော်တုိ့ စ တွဲ နေကတည်းက သူ ပြောနေတာ။ ကျနော်ကသာ သူ နဲ့ ဘယ် အဆင့် အထိ အတူ သွားနိုင်လဲလို့ မရေရာသေးတာ။ အိမ် ထမင်းဝိုင်းမှာ သူနဲ့ အတူ စားရင် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုနေမလဲ သိချင် နေတယ်။’
သူ ဘာကို အတည်ပြုချင်နေလဲ ဆိုတာ ကျွန်မ ရိပ်စားမိတယ်။ တမိုးအောက်မှာ အတူ ယှဉ်လျက် ရှင်သန်ကြဖို့ လူသားနှစ်ဦးအကြားမှာ ထူးခြားတဲ့ ညီညွှတ် ဆက်နွယ်မှု ရှိရတယ်။ လက်ဆုံ စားချိန်မှာရော တိုးဝှေ့ အိပ်ချိန်များမှာပါ၊ စိတ် သက်သောင့်သက်သာရှိမှု၊ လုံခြုံစိတ်ချမှု နဲ့ စိတ်နှလုံး ရင်းခြာမှု ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်။
‘သူ ဆေးရုံ ပြောင်းရမယ်။ အဲဒါ မသွားခင် လက်ထပ်ပြီး သူ့နောက် လိုက်ခဲ့ဖို့ ပြောနေတာ။ ကျနော် အရင်က မိသားစု နဲ့ အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး ဒီကို ပြန်လာခဲ့တာ။ သူ့အလုပ် အရေးကြီးသလို ကျနော့် အလုပ်လဲ အရေး ပါတာပဲ။ ကျနော့် လုပ်လက်စ တွေ ကို ထားပြီး သူ့ နောက် လိုက်သွားရတာမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။’
‘အဖြစ် မခံနိုင်တာလား။ အပြော မခံနိုင်တာလား။’
‘တကယ်ကို အဖြစ် မခံနိုင်တာလား။ အပြော မခံနိုင်တာများ ဖြစ်နေမလား ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်စဉ်းစားဦး’
‘ကျနော့် စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးနေတာပဲ။ ကောင်းကောင်း မစဉ်းစားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့် ဆုံးဖြတ်ချက် မှားမှာကို စိုးနေတာ’
‘မှားတယ် မှန်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ မရှိပါဘူး ရို့ စ်ရယ်။ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား တခုမှာ မှားတယ် ထင်တာတွေ နောက်အပိုင်းအခြား ရောက်ရင် မမှားဘူး ဖြစ်နေတတ်တာ။ ဘယ်လို ရလဒ်ထွက်လာလဲ။ သူတပါးကို ထိခိုက်မှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုပဲ ပြန် ကြည့်ပြီး နောက်မှ ပြောကြရတာ။’
‘အဲဒါပဲ။ ကျနော့် ဂျပ်ခုတ်သမားတွေကို ဒီအတိုင်း ထားခဲ့ရင် ပြိုကွဲ သွားမှာ။ ဒီ အဆင့် ရောက်လာအောင် ကျနော် ဘယ်လောက် လုပ်လာခဲ့ရသလဲ။ တယောက်ချင်းစီ လိုက်တွေ့ ပြီး၊ စည်းရုံးထားရတာ မစု သိ ပါ တယ်။’
သူ့ သက်ပြင်းရှိုက်သံ က လေထုထဲ ပြန့် သွားတယ်။
ကျွန်မ သူ့ လက်ကို လှမ်း ကိုင်လိုက်ပြီး အသာအယာ ဖြစ်ညှစ် ပေးလိုက်တယ်။
‘ရို့ စ် တခါက ပြောဖူးတယ်နော်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုဆိုတာ မခိုင်မြဲဘူးလို့။ အဲဒီလိုပဲ။ လူတယောက်ရဲ့ အားထုတ်နိုင်စွမ်းဟာလည်း မတည်မြဲဘူး။ ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ အကြီးအကျယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အသက်ကြီးလာတော့ သေးဖွဲကုန်ကြတာ။ ငယ်တုန်းမှာ ကိုယ့် အတ္တမာန ဟာ အရေးကြီးနေပြီး အသက်ရလာရင် စိတ်အလိုပြည့်မှု သာယာချမ်းမြေ့မှု ကို ပို အလိုရှိလာတာ။ ရှင့် ဒေါက်တာ နဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ချင်စိတ် ဘယ်လောက် ရှိသလဲ။ ရှင့် လမ်းဖောက်ထားတဲ့ အလုပ် ရပ်ဆိုင်း သွားတာကို အဖြစ် မခံလိုစိတ် ဘယ်လောက် များသလဲ ကိုသာ ပြန် ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လမ်းကို လျှောက်လျှောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သွားဖို့သာ အရေးကြီး တာပါ။ နှစ်ခုထဲက တစ်ခု ကို ရွေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဟိုဘက် ဒီဘက် ညှိရင်ကော။’
‘အိမ်ထောင်ပြုပြီး သူက သူ့ အလုပ်ရှိရာ နေ။ ကျနော်က ဒီမှာ ။ အားချိန်မှာ တွေ့ ။ ဒါမျိုးလား။ တချို့ လူတွေ ဒီလို နေထိုင်ကြတာ သိပါတယ်။ သူတို့ အလုပ်တွေက သုံးနှစ်တကြိမ်လောက် ပြောင်းနေရတာ။ ဒီအဖြစ်ကို သူရော ကျနော်ပါ ဘယ်လောက်ထိ သည်းခံ နိုင်ကြ မလဲ။ သူ့ဘက်တော့ မသိဘူး။ ကျနော်ကတော့ မသေချာဘူး။’
‘အချိန်ယူ စဉ်းစားပါဦးကွာ။ ရို့ စ် ဘယ်လိုပဲ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် တို့ကတော့ ထောက်ခံမှာပါပဲ။’
ကျွန်မကတော့ ရို့ စ် ကို ယုံကြည်သူဖြစ်လို့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူ့ အတွက် သင့်လျော်တဲ့ လမ်းကို သူ လျှောက်တာလို့ မှတ်ယူမှာပါပဲ။ တချိန်တုန်းကလည်း သူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သူ နေထိုင် ရှင်သန်ရမဲ့ ကမ္ဘာ ကို သူ့ဘာသာ တည်ဆောက်ယူခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီရေမြေမှာ ရှင်သန်တဲ့ ပန်းနွယ်နှင်းဆီ ဖြစ်မှတော့ ပို၍ ပို၍ လှပ တင့်တယ်ဖို့သာ ယုံကိုးသင့်တယ် မဟုတ်လား။ သူ့ နာမည်ကိုက ပိုမို လှပ ပွင့်လန်းတဲ့ နှင်းဆီ လေ။
ရို့ စ် ဟာ ကျွန်မ ဘေးနား လာထိုင်ပြီး ခေါင်းမော့ လိုက်တယ်။ ဒီကောင်းကင် ကြည်လင် လိုက်တာ လို့ သူ့ ဘာသာ ရေရွတ်နေတယ်။
စိမ်းရွက်နုသစ် ဝေဆာနေတဲ့ ပန်းနွယ်နှင်းဆီပင်ကို ကျွန်မ လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ နောက်နှစ် နွေဆို ပန်းအဖူးလေးတွေ ဝေနေမှာပဲ လို့ တွေးနေမိတယ်။ အမိုးခုံးလေးဆီ နွယ်တက်ပြီး ပန်းရုံ လေး ဖြစ်လာဖို့ ကတော့ အချိန် ကာလ တခု စောင့်ရ အုန်းမှာပေါ့။
( ဗြာဗြား သို့ ချစ်ခြင်းဖြင့် )
( မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း - ဇွန်လ ၂၀၁၇ )
Posted by မြယာ at 01:57 No comments:
လှေခါး တဆစ်ချိုးအကွေ့ ၌ ရေ စိုရွဲနေသဖြင့် ခြေချော်သွား၍ ခန္ဓာကိုယ် ဟန် ချက် ပျက်ကာ ယိုင်သွား၏။
ဘေး လက်ရမ်းကို အလျင်အမြန် ဖမ်း ကိုင်လိုက်ပြီးနောက် တထစ်ချင်းစီ ဖြည်းညင်းစွာ တက်ရသည်။
အခန်းရှေ့ လှေခါးတဆစ်ချိုးတွင် အလင်းရောင် မရှိ။ မှောင်မိုက်လျက်။
အခန်း တံခါးကို ခေါက်လိုက်လျှင် အပြုံးဖြင့် ကြိုကာ သူ့ အိတ်ကို လှမ်းယူပေးမည့် တစုံတဦး ထွက်လာမည်။ မီးရောင်ဖြင့် လင်းထိန်နေသော အခန်းတွင်းသို့ သူ ဝင်လိုက်ပြီး ပင်ပန်းလိုက်တာ ငါးခြောက်ကြော် ထားရဲ့လား၊ ဗိုက်ကဆာလှပြီ ဟု ညည်းညူပူဆာပြီး တဆက်တည်းမှာပင် ဘုရားပန်းတွေ လှလိုက်တာ ဟု ပြောလေ့ ရှိ၏။
သူ ကျောပိုးအိတ်ကိုဖြုတ်ကာ သော့ကို ရှာသည်။ သံပန်းတံခါး သော့ မှာ သံချေးကိုက်နေပြီး တော်တော်နှင့် ဖွင့်မရ။ သစ်သားတံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် မှိုနံ့ ပါသည့် လေ ကို ရှုလိုက်ရသဖြင့် အသက်အောင့် လိုက်သည်။ အလင်းရောင် မရှိသည့် အခန်းထဲသို့ ရုတ်တရက် မဝင်သေးဘဲ သူ စက္ကန့်ပိုင်းမျှ တုံ့ဆိုင်းနေ၏။ ထို့နောက် အခန်းထဲသို့ ဝင်သွားပြီး မိန်းခလုတ် တင်လိုက်သော် သူ ဖွင့်ထားခဲ့သည့် အိမ်ရှေ့ခန်း မီးချောင်း လင်းလာသည်။ ပြတင်းပေါက်ဆီ အလျင်အမြန် လျှောက်သွားကာ မှန်ချပ်များကို အဆုံးအထိ ဖွင့်လိုက်သည်။ မိုးသက်လေပြည် သုတ်ကနဲ ဝင်လာသည့်အခါ မှ သူ အသက် ပြင်းပြင်း တချက် ရှိုက် ၏။ ခရီး မသွားခင်က သူ ဘုရား ကပ်လှုပူဇော် ခဲ့သည့် ဂန္ဓာမာပန်း အဖြူတို့သည် ပွင့်ဖတ်များ တချို့ ကြွေလျက်၊ တချို့ မှို စွဲကပ်ကာ ခြောက်သွေ့ညိုမည်းနေသည့် ရိုးတံ တွင် ကပ်လျက် ကျန် ရှိ၏။
အဲဒီအိတ်ထဲမှာ စားစရာပါတယ်။ အခန်းထဲ ယူမသွားနဲ့လေ ဟု ပြောကာ သိုးသိုးသွက်သွက် ထ ၍ အထုပ်ကို ဖြေ ပြီးလျှင် ဆွမ်းတော်တင်ဖို့ သပ်သပ် ဖယ်ထားပြီးရင် တခါတည်း စားလိုက်ကြ ဟု ပြောသံ တနေရာမှ လွှင့် လာသည်။ ဟိုကောင်လေး အဲဒါ နင့်အတွက်မဟုတ်ဘူး။ အဖေ့ ဖို့ ဝယ်လာတာ။ ငါ့ အိတ် မွှေ မနေနဲ့ ဟု တားမြစ်သံလည်း ထွက်လာပြန်၏။
ဘုရားစင်၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဝရန်တာ မီးခလုတ်များကို သူ တခုပြီး တခု လိုက်ဖွင့်သည်။ အိပ်ခန်းဆီသို့ ပြန်လှည့်လာပြီးနောက် မီးခလုတ် ကို ဖွင့်သည်။ ကပ်ရက်အခန်းသို့ ကူးပြီး ထပ် ဖွင့်သည်။ အစွန်ဆုံး အခန်း၏ မီးကိုပါ ဆက် ဖွင့်သည်။ လျှပ်စစ် မီးရောင်သည် နေရာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်ကာ အခန်းအားလုံး ထိန်လင်း လာသည်။ မှောင်မိုက်ခြင်းသည် ကွယ်ပျောက်ပြီ။ သို့သော်လည်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည် ကြီးစိုးမြဲပင်။ အိမ်ရှေ့ခန်းသို့ ပြန်ထွက်လာပြီး ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို ဖွင့်၏။ ဘီဘီစီ သတင်းကြေငြာသူကို မြင်ရ၏။ တေးဂီတလိုင်းသို့ ပြောင်း လိုက်ပြီးနောက် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပြန်ချ လိုက်သည်။ ဆူညံသော သီချင်းသံ ထွက်လာသည့်အခါ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် ချထားသည့် ကျောပိုးအိတ်ကို ကောက်ယူ၍ အိပ်ခန်းဆီသို့ သွား၏။
ခေါင်းအုံးစွပ်နဲ့ အိပ်ယာခင်းအသစ် လဲထားပေးရဲ့လား။ အိတ်ထဲမှာ ပလပ်စတပ်နဲ့ ထုပ်ထားတာတွေ အခု လျှော်မှ ရမယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ တခါတည်း ထည့်ထားမှ ရမှာ ဆိုသော စကားများသည် အခန်းနံရံများမှ ပဲ့တင်သံ လာသည် ထင်ပါရဲ့။
မီးအားထိန်း ခလုတ် စိမ်းသွားသဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ စ တင် အလုပ်လုပ်လာသည့် အသံသဲ့သဲ့ ကြားရလေသည်။ သွားဖွင့်ကြည့်သော် ပိန့်ရှုံ့ နေသည့် မုန်လာဥနီ နှစ်လုံး၊ ခရမ်းချဉ်သီးတထုပ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းအပုပ်များ၊ ခြောက်သွေ့နေသော နံနံပင် တစည်းတို့ကိုိ မြင်ရသည်။ ပုပ် အဲ့အဲ့ အနံ့ ရလာ သဖြင့် ချက်ချင်း ပြန်ပိတ်လိုက်၏။ ဒါတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကျန်နေခဲ့ပါလိမ့်။ ခရီးမထွက်ခင် ဘာမှ မကျန်အောင် သူ ရှင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား။
နံရံတွင် ကပ်ထားသည့် ရေသန့်ဗူးကြီးမှ ရေတခွက် ဖွင့်ယူကာ သောက်သည်။ ရေ ကုန်ခါနီးပြီ။ မနက်ဖြန် ရုံးမသွားခင် ရေပို့သမား အချိန်မီ လာနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း တွေးမိသည်နှင့် သူ မျက်မှောင်ကုပ်သွား၏။ ကြောင်အိမ်ကို ဖွင့်လိုက်သည့်အခါ ပိန်လှီနေသည့် ကြက်သွန်နီတချို့ ကို မြင်ရသည်။ ငါးခြောက်များ သိမ်းထားသည့် ဘူးကို ရှာသည်။ တွေ့သော် လှီးဖြတ်ထားသော ငါးယောင်ခြောက် လက်တဆုပ်ကို ရေစိမ် လိုက်သည်။ ထမင်း ချက်ရအုန်းမည်။ ဆန် ကော။ ဆန် ကျန်သေးရဲ့လား။
ဆန်အိုးထားသည့် အကန့်တွင် ရှိနေဆဲ ဘူးကြီးကိုိ ဖွင့်လိုက်ပြီးမှ သတိဝင်လာ၍ ပြန်ပိတ်လိုက်၏။ ဆန် ဒီမှာ မထည့်တာ ကြာလှပြီလေ။ ဆန် ဘယ်မှာ သိမ်းထားသလဲ။ ကြောင်အိမ်ဆီ တဖန်ရောက်လာပြန်လေသည်။ ခေါင်းငုံ့ ရှာသော် အောက်အဆင့်တွင် ပလပ်စတစ်နှင့် ထုပ်ထားသည့် ဆန် အနည်းငယ်ကိုိ မြင်သည်။ မှို နံ့ ရ ချင် နေပြီ။ ဒီ ဆန် တပြည် ဝယ်ထားတာ ဘယ်နှစ်လ ရှိပြီလဲ။ တလ လား။ နှစ်လ လား။
ဒီနေ့ တလစာ ဆန် အပြည် နှစ်ဆယ် ဝယ်မယ်။ ဆီလည်း ကုန်တော့မယ်။ ဈေးကို လိုက်ခဲ့ပေးအုန်း။ ရွှေဘို ထူးထူးရှယ် တပြည်လောက် ဝယ်ပြီး အုန်းထမင်း ချက်စားစို့ ဟု ရွင်ကြည်စွာ ပြောဆိုသည့် ဟန်ကို မြင်လာသည်။ မွေးပျံ့သည့် အုန်းထမင်း ရနံ့ သည် အိမ်သားများ၏ စိတ်နှလုံးကို ဝမ်းမြောက်စေ၏။ အတူတကွ ရယ်မောသံများ ကြားလိုက်ရသည် ဟု ထင်မြင်လာ၏။
ထမင်ပေါင်းအိုး မီးခလုတ် နှိပ်ပြီးသည်နှင့် ရေစိမ်ထားသော ငါးခြောက်ကို နှစ်ခါပြန် ဆေး၍ ကြော်သည်။ ငါးခြောက်ကြော်အနံ့ သည် မီးဖိုခန်း၏ အောက်သိုးသိုး အနံ့ နှင့်အတူ လုံးထွေးပေါင်းစပ် သွားသည်။ အနံ့ စုပ်သည့် ခလုတ်ကိုိ သူ လှမ်း ဖွင့်လိုက်၏။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ပုပ်သိုးနေသည့်အရာများကို လွင့်ပစ်သည်။
သူများ ရေချိုးနေတုန်း ငါးမကြော် ကြနဲ့လေ၊ ဒီမှာ မွန်ထူ နေတာပဲ၊ စိတ်တိုတယ်၊ အဲဒီ ငါးခြောက်ကို သူများ အိမ်ပြန်မရောက်ခင် ကြော်ထားကြပါလား၊ တကယ်ပဲ ဟူသော နိုင်လိုမင်းထက် ဆန်သည့် စကားကို အကြိမ်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်အောင် ပြောခဲ့လေသည်။
သူ လက်ဆေးပြီး အိမ်ရှေ့ ခန်း ပြန်ထွက်သွားသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်တွင် ငယ်ရွယ်နုပျို ချောမောသည့် သီချင်းသည်များ အုပ်စုလိုက် ကခုန်နေသည်ကို မြင်ရသည်။ သူ တံမြက်စည်း ကောက်ကိုင်ကာ အမှိုက် စ လှည်းကျင်းလေသည်။ သူ့အခန်း ကုတင်ခေါင်းရင်းတွင် ဖုန်မှုန့်များ ကပ်ငြိနေသည်ကို မြင်ရ၏။ တံမြက်စည်း ကို ချထားလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းဆီသို့ သွား၏။ အဝတ်ရေစို တခုဖြင့် ပြန်လာကာ ဖုန်များကို သုတ်ပစ်လိုက်၏။ အိပ်ယာကို ဖုံးထားသော အဝတ်စကို ဖယ်၍ ခါ သည်။ ခေါင်းအုံးစွပ် နဲ့ အိပ်ယာခင်း ခဏနေမှ လဲမည်ဟု သူ တွေး၏။
အဝတ်ရေစိုကိုင်လျက် တဘက်ခန်းသို့ ကူး၏။ ကုတင်ခေါင်းရင်းတွင် စိမ်းပြာလဲ့လဲ့ အရောင်ကလေးကို မြင်လိုက်ရသည်။ မှို တက်နေတာလား။ သူ အားဖြင့် ဖိ၍ တိုက်လိုက်သည်။ ပလပ်စတစ်အိတ်ကြီးဖြင့် လိပ်ကာ တိပ် ပိတ်ထားသည့် အိပ်ရာလိပ်ကို စစ် လိုက်၏။ စိမ်းပြာရောင် ကို မမြင်ရ။ တော်ပါသေးရဲ့။
အစွန်ဆုံးအခန်းသို့ သူ ရောက်လာ၏။ နံရံတွင် လိပ်ကာ ထောင်ထားသည့် ဖျာနှင့် မွေ့ယာ တွဲရက် အလိပ်ကို သွားကြည့်၏။ ဖုန်ရောင်ကြောင့် ညစ်နေသည်ကလွဲလို့ ပြာလဲ့လဲ့တို့ကို မမြင်ရ။ အိပ်ယာလိပ်နံဘေး ၌ ဆေးရောင်စုံဘူးများနှင့် သီချင်းစာအုပ် သုံးလေးအုပ် ရှိနေသည်။ သူ ကောက်ယူလိုက်ပြီး နံရံကပ် စာအုပ်စင် ပေါ်သို့ လှမ်းတင်သည်။ သည်မှာလည်း ဖုန်ထု မင်းမူနေပြန်ပြီ။ နံရံပေါ်တွင် ချိတ်ထားသော အစိမ်းရောင်လမ်းကလေး ဟု အမည်ပေးထားသည့် ပန်းချီကားကို လှမ်း ကြည့်လိုက်သည်။
နင် ကြိုက်တဲ့ လမ်းကို ဆွဲထားပေးတာ၊ ငါ့ကို ဆေးဘိုး ပြန်ပေး ဆိုသည့် စကားကို သတိရမိသည်။ ဆေးဖိုးတော့ မရဘူး၊ ခြေထောက်ပဲရမယ် ဟု တုံ့ပြန်သောအခါ အမေ၊ အမေ့သမီး ကျွန်တော်ကို အနိုင်ကျင့် နေတယ် ဟူသော ရယ်ရွှန်း စွက်သော အော်သံ ဆူဆူညံညံ ကို ကြားရပြန်သည်။
နံရံကပ်ဘီဒိုကို ဖွင့်လိုက်သော် တပတ်နွမ်း အဝတ်အစား အနည်းငယ် ကို တွေ့ရသည်။ အောက်အဆင့်တွင် ဂျင်းဘောင်းဘီ သုံးလေးထည် ရှိနေသည်။ ဒီကောင်လေးဟာ သူ့ဘောင်းဘီတွေ ဘာလို့ အကုန် မယူသွားပါလိမ့်၊ မတော်တော့လို့ ထားခဲ့တာလား။
အိမ်ရှေ့ခန်းမှ သီချင်းသည်များကတော့ ဆက်လက် ခုန်ပေါက်နေဆဲပင်။
ဘုရားကျောင်းဆောင်ကို သန့်ရှင်းလိုက်ပြီးနောက် ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ပန်းအခြောက်များကို စွန့်ပစ်ပြီး ပန်းအိုးကို ဆေးကြောတိုက်ချွတ်သည်။ ဒီနေ့ ဘုရားပန်း မဝယ်နိုင်တော့။ ပန်းအညှိုး ပန်းအခြောက်ကို ကပ်ထားရတာနှင့်စာလျှင် မရှိသည်ကမှ တင့်တယ်အုန်းမည်။ ပန်းမရှိလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ဘာမှ မဖြစ်ဟု ရေရွှတ်မြည်တမ်းသော်လည်း သူ့ စိတ်ထဲ ဘဝင်မကျသလို တမျိးတမည် ဖြစ်လာသည်။
ရေခွက်များကို ဆေးကြောပြီး သောက်တော်ရေ အသစ် ဖြည့်၏။ သူ အတန်အသင့် စိတ်ကြည် လာသည်။ ဘုရားပန်းနှင့် သောက်ရေကပ်လှုခြင်းသည် ကုသိုလ်အမှုကို ပြုခြင်း ဟု သူ အမှန်တကယ် သက်ဝင်ယုံကြည်ရဲ့လား ဟူသော အတွေး ဝင်လာသည်။ သူ့ မိဘဘိုးဘွား သည် ထိုအရာကို ကုသိုလ်အမှု ဟု ယူမှတ် ကျင့်သုံးခဲ့လေတော့ သူ့ ထံ သို့ အလိုအလျောက် စိမ့်ဝင်ခြင်း ရှိခဲ့လေပြီ။ သူ အိမ်ပြန်လာချိန် ဘုရားပန်းတွေ ဝေဆာ လှပနေလျှင် စိတ်ကြည်နူး သည် မဟုတ်လော။ သည်တော့ ထို ကပ်လှုခြင်းအမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ထားကာ ရိုကျိုး ဆည်းကပ်သူ၏ စိတ်ကြည်လင် ရှင်းသန့်မှု အတွက်သာ မဟုတ်လော။ ဘုရားပန်းဟုသာ ခေါ်ကြသည်။ တကယ်တန်းတော့ ကပ်လှုသူအတွက် ပန်း သာ ဖြစ်သည်။
သူ့ အတွေးကို အမေသာ သိလျှင် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေ ပြောပြန်ပြီဟု အပြစ်ဆိုချေမည်။ အပြစ်ဆိုရုံမက ဆူပူကြိမ်းမောင်းလျှင်လည်း ခံလိုက်အုန်းမည်။ မိခင်နံဘေး တိုးဝင်ကာ သူ့ အတွေးကို ပြောခွင့် သာ ရချင်မိ၏။ ထိုအခွင့်သည် တဖန် ပြန် ၍ မရှိနိုင်တော့။
သူ့ အာရုံကြောများ တင်းလာ၍ တဖြစ်ဖြစ် မြည်လာ သည်။ လည်ကုပ်မှသည် ငယ်ထိပ်ဆီသို့ ကျဉ် တတ် သွားသည့် ခံစားမှုသည် မျက်ဝန်းအစုံသို့ အရောက်တွင် ရေငွေ့ ရိုိက်၏။
အကြာကြီး စိမ် ချိုးမနေနဲ့လေ။ အဝတ်တွေ လျှော်မနေနဲ့။ ထားခဲ့လိုက်တော့။ ညနေစောင်းမှ ခေါင်းလျှော်မနေနဲ့အုန်း။ အဖေ ထမင်း စားဖို့ စောင့်နေတယ်။ အမြန်လုပ် ဟု ရေချိုးခန်းတံခါးကို ခေါက် ပြီး ပြောလိုက်သည့် စကားသံ ကို ကြားလိုက်ရသည်ဟု ထင်သဖြင့် တံခါးဝဆီသို့ ယမ်းယောင်စွာ လှည့်ကြည့်မိသည်။
ရေပန်းအောက်သို့ ခေါင်း ထိုး လိုက်ပြီး မျက်စိ စုံမှိတ် လိုက်သည်။ ဆံ စ ပေါ်သို့ ကျ လာသည့် ရေအေးအေး သည် ပါးပြင်ပေါ်မှ ရေပူများနှင့်အတူ ခြေအစုံဆီသို့ စီးဆင်းလာသည်။ လောင်မြိုက်တတ်သည့် အရာတိုင်းကို ရေဖြင့် မငြိမ်းသတ်နိုင်။
ကြည့်သူ မရှိသည့် ရုပ်မြင်သံကြားစက် တေးဂီတ လိုင်း တွင် အကအခုန် သီချင်းများ ပြီးဆုံးသွားကာ ငြိမ့်ညောင်းသည့် သံစဉ်များ တီးခတ်နေကြသည်။
အဝတ်အစား လဲလှယ်ပြီးသည်နှင့် သူ ဗိုက်ဆာပြီ။ ထမင်းပန်းကန်ထဲသို့ ငါးခြောက်ကြော် ပုံထည့်လိုက်ပြီး စားပွဲတွင် ထိုင်သည်။ ထမင်းစားပွဲသည် အခါတိုင်းတွင် အခန်းအလယ်တွင် ရှိစမြဲ။ ယခုတွင်မူ နံရံတွင် ကပ်လျက် ထား၏။ ဘဝ သည်လည်း တခြမ်း ကပ် ခဲ့ပြီ။
ဟင်းခွက် နှိုက်ကြသည့် သူတို့ လက်များ ရှုပ် ရှတ် ခတ်နေလျှင် ဒီကလေးတွေနဲ့တော့ ထမင်းဝိုင်း မှာ ယာဉ်ထ်ိန်းရဲ ခေါ်မှ ရမယ် ဟု ဖခင်၏ စ နောက်သံ ကို အခါတိုင်းတွင် ကြားရလေ့ ရှိ၏။ ရယ်မောသံ စကားပြောသံများနှင့် လူစုံတက်စုံ ထမင်းဝိုင်း၏ စိတ်အာဟာရ ကို စားသုံးခဲ့ရသော နှစ်ကာလများသည် အဝေးမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။
ထမင်း ၂ လုတ် ဝါးပြီးနောက် အာခေါင် ခြောက်လာသဖြင့် သူ ထ လာကာ ရေတခွက် ခပ်သည်။ အနည်းငယ် သောက်လိုက်ပြီးနောက် ခွက်ထဲရှိ လက်ကျန်ရေများကို ထမင်းပန်းကန်ထဲသို့ လောင်းထည့်လိုက်၏။ ထိုနောက် ရေစိမ်ထမင်းနှင့် ငါးခြောက်ကြော် ကို ဆက် စားသည်။ စားရင်း ပန်းကန် ကိုင်လျက် အိမ်ရှေ့ခန်း ဆီသို့ ထွက်လာ၏။ အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ယူလိုက်ပြီး အစားအသောက် ချက်ပြုတ်သည့် လိုင်း သို့ ပြောင်းလိုက်သည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသည့် ဟင်းရည်အိုးထဲသို့ ထည့်လိုက်သည့် အသီးအရွက်များကို စ မြင် သည်။ နာမည်ကျော် ဗီယက်နမ် စားဖိုမှုး၏ အာရှဒေသ ဟင်းလျာသည် မြင်ရုံနှင့်ပင် ခံတွင်း စို စေ သည် မဟုတ်လော။ သူ ရေစ်ိမ် ထမင်းကို နာနာ ဝါး၍ မျိုချ ၏။
စားသောက်ဆေးကြောပြီး သည်နှင့် သူ ရေတင်ခလုတ်ကို သွားဖွင့်သည်။ နောက်ဘက် ဝရန်တာသို့ ထွက်သွားကာ ပလပ်စတစ်ခွက် ထဲ ရေထည့်ကာ စိမ်ထားခဲ့သော အပင်ကို သွားကြည့်၏။ ရေဓာတ်ကလေးကြောင့် အပင်သည် သေတော့ မသေ။ သို့သော် သစ်ရွက်များ ငိုက်ကျ နွမ်းရိ ကာ စိမ်းစိုသန်စွမ်းခြင်း မရှိ။
သစ်ပင်တွေမှာလည်း အသက်ရှိတယ်။ ရုံးက ပြန်လာရင် သွားကြည့် ပြီး နှုတ်ဆက်လေ။ ကိုယ်တိုင် ရေလေးဘာလေး လောင်းပေးအုန်း ဟူသော အကြံပြုချက်ကို သူ ကြားနာခဲ့ဖူးသည်။ ထိုစဉ်ကာလ၌ အပင်တို့သည် စိမ်းမြရွန်းသစ်သော အရွက်နုတို့ဖြင့် လှပ တင့်တယ်ခဲ့သည် မဟုတ်လော။
အပင်စိုက်ထားသည့် အိုးကို ရေချိုးခန်းဆီသို့ မ ယူ လာပြီး ရေ ရွဲရွဲ လောင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် အရင် ထားနေကြနေရာ အိမ်ရှေ့ ပြတင်းပေါက်ဘောင် သို့ ပြန်ရွေ့သည်။ သစ်ရွက်တို့ ငိုက် ကျ နေမြဲပင်။ စိမ်းစို လန်းဖြာ သည့် သစ်ရွက်နုလေး ထွက်လာနိုင်ဖို့ အချိန် ကြာအုန်းမည်။ ထိခိုက်ခဲ့သော ဘဝ တို့ တဖန် စိမ်းလန်း လာရန် ကာလ အပိုင်းအခြား တခု လွန်မြောက်ရအုန်းမည်။
ပြန်ရောက်ကတည်းက ဆက်တိုက်ဖွင့်ထားသော ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို သွား ပိတ်သည်။ ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်မှု သည် တဖန် ကျ ရောက်လာ၏။ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့သို့ သူ သွားထိုင်ပြီး ဝတ်ပြုသည်။ သွားတိုက်ပြီးသည်နှင့် မီးဖိုခန်း ရေချိုးခန်း ဝရန်တာ မီးများ ပိတ်လိုက်၏။ အိမ်နောက်ဘက် တံခါးများ ပြတင်းပေါက်များ ပိတ်သည်။ သူ့အခန်းမီးကိုသာ ချန်လျက် ကျန် ခလုတ်များကို ပိတ်လိုက် သည်။
အိပ်ယာခင်းနှင့် ခေါင်းအုံးစွပ် အသစ်များ လဲလှယ်ပြီးနောက် သူ ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲ လိုက်သည်။ ချက်ချင်း ပြန် ထ လာပြီး နံရံကပ် စာအုပ်စင်ပေါ်မှ စာအုပ်တအုပ်ကို ဆွဲယူလိုက်၏။
ညနက်သန်းခေါင်ထိ စာဖတ်မနေနဲ့လေ၊ မနက်လည်း စောစော ထ ရ အုန်းမှာ မဟုတ်လား။ အိပ်တော့ အိပ်တော့ ဟု သတိပေးသူ မရှိတော့သော်လည်း သင့်လျော်သည့် အချိန်တွင် သူ အိပ် ရမည်။ ထိုအချိန်
ကျော်လွန်ပါက တညလုံး သူ အိပ်နိုင်မည် မဟုတ်တော့။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော အမှုကိစ္စများကို အရွယ် နှင့် ခန္ဓာဗေဒ က မောင်းနှင်သတိပေးပြန်၏။
တဖြည်းဖြည်း ည နက် လာပြီ။ ဆူညံသံ၊ စကားပြောသံ၊ ရေစက်မောင်းသံ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်အသံ တို့ တစ တစ ပါးလျ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုမို ဆိတ်ငြိမ် လာ၏။ စာအုပ်ကို ဘေး ချ ထားလိုက်ပြီး မျက်စိများ အသာ မှိတ်ထားလိုက်ကာ၊ သူ့ စိတ်အာရုံတွင် မြင်လာသည့် ပုံရိပ်ယောင်များကို ဆက် ဖတ် နေသည်။ ပျော်ရွင်စရာများ အတွက် နှုတ်ခမ်းဖျားတွင် အပြုံး တွဲခိုလျက်။ ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းမှုများအတွက် မျက်ဝန်းအစုံ စိုစွတ်လျက်။
အတန်ကြာသော် အိပ်ယာ ခေါင်းရင်းရှိ မီးခလုတ်ကို လှမ်း ပိတ် လိုက်သည်။
သူ့ ကမ္ဘာတွင် တိတ်ဆိတ်မှောင်မိုက်ခြင်း သာ ကျန် ၏။
Posted by မြယာ at 02:04 1 comment: